Uncategorized Archives | THANT ZIN OO
In my view, he has every right to be on this platform so long as he does not violate any community standards. In fact, campaign like this is what makes him famous in the first place.
I suppose campaign like this can be viewed as cyber-bullying and it in itself might be against community standards set by Facebook.
via Voyager 1 Fires Up Thrusters After 37 Years
The campus, officially named Regional College 2, was previously known as RC2among students before the name was changed to “Yangon University (Hlaing campus)” in 1981.
via Yangon University’s Hlaing campus to reopen on December4| Eleven Myanmar
မင်းတို့ တက်ချင်တဲ့ တက္ကသိုလ်ပုံစံကို မင်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးလို့ရတယ် ဆိုတာကို မမေ့ကြနဲ့။ အဓိက ကတော့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ တက္ကသိုလ်ရဲ့ နှလုံးသားဝိဉာဉ် ပျောက်ပျက်မသွားဘူး ဆိုရင် ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲ တက်ရ၊ တက်ရ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲ တက်ရ၊ တက်ရ တက္ကသိုလ်ဟာ တက္ကသိုလ်ပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နှစ်သစ်လက်ဆောင် အဖြစ် အလေးအနက် ဆုတောင်းမိ၏။